कौसीखेतीको माटो खुकुलो बनाउने यसरी..... | आफ्नैबारी
नयाँ र ताजा
कौसीखेती गर्न चाहिने आवश्यक सामानहरु बिक्रीमा
कौसीखेतीको माटो खुकुलो बनाउने यसरी…..
Published on : September 14, 2019 September 14, 2019 by आफ्नैबारी
खेती गर्न प्रयोग हुने माटो खुकुलो हुनुपर्छ। माटो खुकुलो भयो भने पानी, मल र जराबाट बिरुवाले लिने अक्सिजनको सप्लाई ठिक तरिकाले हुने हुँदा राम्रोसंग बिरुवाको बृद्धि विकास हुन्छ। खुकुलो माटोमा लगाईएको तरकारीले पनि राम्रो फल दिन्छ।
कौसीखेतीको तयारी गर्दा सर्वप्रथम माटो खुकुलो बनाउन उपाय अपनाउनु पर्छ। चिम्ट्याईलो (चाम्रो) माटो कौसी खेतिको लागि राम्रो मानिदैन। बलौटे (तर मलिलो) र ढिक्का नपर्ने, खुकुलो माटो नै कौसीखेतीको लागि राम्रो हुन्छ। खुकुलो माटो तपाईको घर छेउमा पाईन्छ भने त्यसमा कम्पोष्ट मल मिसाएर कौसीको लागि माटो सजिलै तयार पार्न सकिन्छ।
खेतबारीकै माटोलाई गमला वा ट्रेमा भरेर बोट बिरुवाबाट राम्रो फलको आशा गर्न सकिनदैन।
कस्तो ठाउको माटो कौसीखेतीको लागि उपयोगी हुन्छ त?
कौसीखेतीको लागि नियमित खेती नभएको जमिनको माटो संकलन गर्नु पर्दछ। बेला वेलामा चिस्यान पाउने ठूलो रुखको छेउ छाउको माटो पनि राम्रो हुन्छ। जंगली पाखोको माटो पनि कौसीखेतीको लागि राम्रो हुन्छ। बाहिरी भागमा पातहरु कुहिएर सतह बनेको जमिनको माटो झन उपयोगी हुन्छ। जैबिकरुममा नै मलिलो जमिनको माटोमा थप मल धेरै मिसाउनु पर्दैन। प्रकृतिको रुपमा नै यो माटोमा मल बन्ने र बनाउने प्रकृया संचालन भैराखेको हुन्छ। त्यसैले कौसीमा पनि यो स्वतह यो क्रम चल्ने संभावन पनि हुन्छ।
माटोको सुधार कसरी गर्ने?
काठमान्डौ जस्तो सहरी क्षेत्रमा यस्तो माटो सजिलै उपलब्ध हुन गाह्रो छ। त्यसैले घर नजिकको खाली ठाउकै माटो प्रयोग गर्नु पर्यो भने धेरै खेतिपाती नभएको जमिनको माटो संकलन गर्नुपर्छ। भनेको जस्तो माटो संकलन गर्न सकिएन भने त्यसलाई सुधार गर्नको लागी थप काम गर्न सकिन्छ।
कडा र कम मलिलो माटोलाई सुधार गर्ने एक सरल जैबिक तरिका हो, त्यो माटोमा प्रशस्त कम्पोष्ट मल मिसाउने। गाईबस्तुको मल माटो सुधार गर्न निकै राम्रो हुन्छ। पशुचौपायाको पाकेको मल बजारमा पाईने अरु मल भन्दा सस्तो र लामो समय सम्म टिकाउ हुन्छ।
गाईभैसीको काँचो गोबर मल हैन। गोबरलाई केहि महिना कुहाएर (पकाएर)मात्र मल बन्छ। गोबरबाट बनेको मल माटोमा मिसाउदा कौसीखेती गर्ने माटो मलिलो मात्र हैन खुकुलो र हलुङ्गो समेत बन्दछ। गोबरमल सजिलै पाईदैन भने बजारमा पनि कम्पोष्ट मल किन्न पाईन्छ।
चिम्ट्याईलो र कडा माटोलाई खुकुलो बनाउन अरु थप उपाय पनि अपनाउन सकिन्छ। माटो निकै कडा र सारो खाले छ भने त्यसलाई खुकुलो बनाउन बालुवाको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। बालुवामा बिरुवालाई चाहिने खानेकुरा निकै कम हुन्छ। बालुवा मिसाएको माटोमा कम्पष्ट मल अझ थप मिसाउनु पर्छ।
घरबाट निक्केको फोहोर र झारपात कुहाएर बनाईएको खाँद
माटो खुकुलो बनाउन घरबाट निक्केका सबैखाले कुहिने फोहोर पनि मिसाउन सकिन्छ। घरबाट निस्किएका कुहिने फोहोरलाई केहि हप्ता कुहिन वा केहि नरम बनाउनका लागि कुनै ड्रम वा खाडलमा राख्न सकिन्छ। हल्का कुहिन थालेको सो फोहोरलाई माटोको तल्लो सतहमा राखेर बिरुवा रोप्न सकिन्छ । यसरी राखेको फोहोर पछि क्रमसः मल बन्दै जान्छ। ६-८ महिना पछि पुरै मल बनेपछि यसले माटो खुकुलो बनाउन ठूलो काम गर्छ।
घरको बगैचाबाट निक्सकेका पातहरुले बोट बिरुवालाई मल्चिङ गर्न सकिन्छ। मल्चिङ् भनेको माटोको बाहिरी सतहमा राखिने एक प्रकारको कभर हो। यसले माटोमा रहेको पानीको मात्रालाई चाडै सुक्न दिदैन। अनावश्यक झारहरुलाई उम्रन पनि दुरुत्साहित गर्छ। यसरी एक सिजनमा मल्चिङ गर्न प्रयोग भएका पातहरु अर्को सिजनमा माटोमा मिसिन जाने हुँदा पनि माटो खुकुलो बनाउने काममा सहयोगी काम गर्ने गर्दछन।
माटो खुकुलो बनाउन धानको भुस र खरानीको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
खरानीमा पाईने तत्वहरु खेतिबालीका लागि उपयोगी हुन्छन। जैबिक चिजहरु डढेर बनेको खरानीको केहि मात्रा मिसाउदा पनि कौसीखेतीमा प्रयोग गरिने माटो राम्रो हुन्छ। यसले माटो खुकुलो बनाउन पनि थप सहयोग गर्दछ। माटोमा ५-७ प्रतिशत खरानीको मात्रा राम्रै मानिन्छ।
धानको भुस पनि माटो खुकुलो बनाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ। धानको भुसले पानी संचय गर्न सक्दैन। त्यसैले धानको भुस धेरै भयो भने गमलामा पानी चाडै सुकेर जाने समस्या हुन्छ। भुस कुहिसके पछि चाहि यसले जैबिक क्रियामा सहयोग समेत गर्दछ।
खुकुलो र मलिलो माटो छैन भने त्यसलाई उर्वर बनाउने पहिलो कार्य भनेको माटोमा मलको मात्रा बढाउनु नै हो। यसलाई थप खुकुलो बनाउन मलसंग बालुवा, भुस र खरानी जस्ता पदार्थ पनि मिसाउन सकिन्छ। यि चिजहरु माटोमा के कति मिसाउने भन्ने कुरा संकलन गरेको माटो कत्तिको मलिलो र खुकुलो छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ। सिँचाई गरेको पानी सोस्ने र बढि भएको चाहि बगेर जाने खालको माटो भयो भने तपाईको कौसीमा फलहरु राम्रो लाग्ने छन।
नेपालमा हुने नयाँ खेतिहरु
कौसीखेती सिक्ने हो? सुरुमा धनिया रोप्नुहोस।
२४ घण्टा अक्सीजन दिने तुलसीका फाइदाहरु
Previous Previous post: करेसाखेती गर्न कत्रो ठाँउ चाहिन्छ?
Next Next post: कसरी गर्ने स्नेक प्लान्टको स्याहार?
कसरी गर्ने स्नेक प्लान्टको स्याहार?
करेसाखेती गर्न कत्रो ठाँउ चाहिन्छ?
के तपाईको बाथरुम सुन्दर पनि छ?
हावा सफा गर्ने ५ विरुवा
जापानमा पुर्वविमानपरिचारीकाको नेपाली करेसा
यि हुन गमलामा ‘सजिलै’ फल्ने ५ तरकारी
चियाकप जत्रो गमलामा फूल्ने ईन्डोर फूल
घरमै च्याउ फलाउनुहोस यसरी…
हरियो प्याज तयार गर्ने सरल तरिका
Copyright © आफ्नैबारी Theme: Minimal Lite by Thememattic